Adeegsiga Tijaabinta otomaatiga ah si loo hagaajiyo Khibrada Iibsiga | Martech Zone
Joogitaanka ka hor isbeddelka degdegga ah iyo soo noqnoqoshada ee meherad ballaadhan oo ballaadhan, sida Salesforce, ayaa noqon karta caqabad. Laakiin Salesforce iyo AccelQ waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo wajihi lahaa caqabadaas.
Isticmaalka barnaamijka maareynta tayada degdega ah ee 'AccelQ', oo si adag ugu dhexjira Salesforce, wuxuu si weyn u dardar geliyaa una hagaajiyaa tayada sii deynta urur ee Salesforce. AccelQ waa shirkado madal wada shaqeyn ah oo u adeegsan kara otomaatigga, maareynta, fulinta, iyo raadinta tijaabinta Salesforce.
AccelQ waa qalab otomaatiga tijaabada ah ee joogtada ah iyo maareynta maareynta ee kuqoran liiska Isweydaarsiga Salesforce. Xaqiiqdii, dhowr ka mid ah macaamiisha shirkadda 'Salesforce' ayaa u codeeyay AccelQ, marka la eego qiimaha ay keeneen si ay u hagaajiyaan wareegyadooda sii-daynta Salesforce. AccelQ waxay martay nidaam qiimayn adag si loogu qoro Salesforce AppExchange. Xaqiiqdii, dhowr ka mid ah macaamiisha shirkadda 'Salesforce' ayaa u codeeyay AccelQ, marka la eego qiimaha ay keeneen si ay u hagaajiyaan wareegyadooda sii-daynta Salesforce.
Madal Maareyn Imtixaan Dhameystiran
AccelQ waa madal maareyn tijaabo oo dhameystiran oo ka caawineysa shirkadaha inay keenaan fulin tayo leh iibinta Salesforce. Lagu martigeliyey daruurta, AccelQ ayaa aad uga dhakhso badan uguna fudud in la dejiyo marka loo eego Provar ama Selenium.
Qalabka hadda jira ee isku dayaya inuu otomatiga u baaro iibka Salesforce ma guuleysto maxaa yeelay ma awoodaan inay la yimaadaan aragti ganacsi. Xitaa waxay ku guuldareystaan ​​inay wax ka qabtaan isdhaafsiga adeegsadaha firfircoon ee Salesforce iyo cunsurradeeda. AccelQ runti wuu fududeeyaa, otomaatiyaa, oo wuxuu dardar geliyaa otomaatiga imtixaanka Salesforce iyadoo horay loo dhisay Salesforce Universe, xalka gaarka ah ee AccelQ ee taageerida nidaamka deegaanka Salesforce ee wax soo saarka.
Salesforce waxay ku heli kartaa khiyaano qurux badan websaydhkeeda firfircoon, iframes, iyo Visualforce, in la magacaabo dhowr, oo ay weheliso baahida loo qabo in la taageero Salesforce's Lightning iyo Classic editions. AccelQ waxay si aan kala go 'lahayn ugu xallisaa dhammaan isku-dhafnaantaas qalab otomaatig ah oo fudud oo lambar la'aan ah oo laga heli karo daruurta. Hirgelinta iyo sii-deynta wareegyada ayaa si weyn u dardar-geliyay guud ahaan saldhigga macaamiisha ee 'AccelQ's Salesforce' iyada oo adeeg tayo sare leh ugu gudbineysa ganacsiga qiimo aad uga hooseeya.
Qolalka imtixaanka ee AccelQ ee iibka Salesforce waxay wax ka qabtaan qorshaynta tijaabada ku saleysan moduleka ama isbedelka ku saleysan, fulinta, iyo la socoshada qorshooyinka horay loo qaabeeyey. Waxay u oggolaanaysaa shirkadaha inay la socdaan kiisaska tijaabada ah ee la fuliyay iyadoo la raacayo hannaanka ganacsiga waxayna awood u siineysaa wareegyada ansaxinta deg degga ah ee isbeddelada qaabeynta socda ee fulintooda Salesforce.
Qalabka iibka ee 'Salesforce Content Pack' wuxuu dardargeliyaa otomaatiga imtixaanka Salesforce oo leh qeexitaan loo yaqaan 'Salesforce Universe', qalab otomaatig ah oo luqad aan dabiici ahayn, iyo awoodaha falanqaynta saameynta isbeddelka iswada. Shirkadaha waxay ku guuleysan karaan dardargelinta 3x ee wajiga hubinta tayada ee fulinta Salesforce.
Tijaabinta otomaatiga iyo Maareynta
AccelQ waxay bixisaa otomaatig tijaabo ah oo ah danab-dhaqso iyo fudud, sida Salesforce oo kale. Waxay bixisaa:
Moodal muuqaal ah oo ku saabsan fulinta iibka shirkadda iyo geeddi-socodka ganacsiga
Otomaatiga lambar-la’aanta ah ee fudud oo xoog badan
Qorshaynta tijaabada ah ee caqliga ah iyo fulinta daruurta oo awood u siisay isdhexgal joogto ah
Maareynta imtixaanka oo dhameystiran oo leh raad raadin ku dhisan dhammaan hantida imtixaanka
Agile dashboard loogu talagalay raadinta fulinta iyo warbixin faahfaahsan
Sidoo kale, AccelQ waxay u dhameystirtaa Selenium shirkadaha doonaya inay otomatigooda ku tijaabiyaan codsiyada iibka 'Salesforce' ee ay la leeyihiin Selenium, gaar ahaan marka imtixaanka gacanta oo keliya kaligiis uusan dabooli karin shuruudaha imtixaanka ee baaritaanka dib u gurashada.
Codsiyada lagu dhisay Salesforce waa kuwo aad u adag oo caqabad ku noqon kara in lagu tijaabiyo Selenium. AccelQ waxay u oggolaaneysaa tijaabiyeyaashu inay u soo saaraan kiisaska tijaabada ee loogu talagalay Salesforce si fudud oo ay sare u qaadaan awoodda Selenium, taasoo ka dhigeysa mid la isku halleyn karo, la qiyaasi karo, oo wax ku ool ah.
AccelQ Salesforce Tijaabinta Xaaladda Daraasadda
Mid ka mid ah macaamiisha Salesforce waxay u suurta galisay adeegsadayaasheeda ganacsiga ee Salesforce adeegyo dhameystiran, oo ah isbadal si otomaatig ah loogu tijaabiyo AccelQ
Macaamiilku, oo ah macluumaad caalami ah, xog, iyo shirkad cabbir oo xarunteedu tahay Boqortooyada Midowday (UK), wuxuu rabay inuu sare u qaado waayo-aragnimada isticmaalaha iyo sidoo kale tayada iyo xamaasadda nidaamkeeda maaraynta xiriirka macaamiisha ee Salesforce. Hirgelinta Salesforce waxay muhiim u ahayd ganacsiga, laakiin duruufaha caadiga ah awgeed, tijaabinta dib u gurashada waxay cuni lahayd qadar badan oo ilo ah.
Marka macmiilku wuxuu rabay inuu:
Toos u ansixi hannaanka ganacsiga lix nooc oo kala duwan oo ah noocyada 'Salesforce' ah
Wax ka qabashada kakanaanta kontaroolada Hillaaca Salesforce ee isdhexgalka otomaatiga ah
Iska yaree baaritaanka gacanta laga bilaabo maalmo badan illaa dhowr saacadood
Si wax ku ool ah ula macaamil farsamooyinka firfircoon ee la soo saaray iyo kuwa buul ku yaal Salesforce oo ka fogow dayactirka dusha sare
Awood u yeelo kooxda ganacsigu inay fuliyaan qalab otomaatig ah
Faa'iidooyinka ganacsi ee AccelQ, waxaa ka mid ahaa:
Sii deyn, tayo sare leh sii deynta Salesforce
Dadaalka tijaabada gacanta ee maalinlaha ah ayaa loo yareeyay dhowr saacadood oo dib-u-habeyn otomaatig ah
Hoos-u-dhac weyn oo ku yimid kharashka iyo dadaalka
Qaab-dhismeedka awood u siinaya horumarinta nidaamka cusub ee otomatiga oo in ka badan boqolkiiba 80 dib loo isticmaalo
Waxay awood u siisay kooxaha tijaabinta inay qaabeeyaan oo ay horumariyaan otomatiga si isdabajoog ah ulana shaqeeyaan hirgelinta muuqaalka cusub
Farsamo heer sare ah oo leh faa'iidooyin waara
Dhexgalka hababka ugu fiican iyo mabaadi'da naqshadeynta si joogto ah wax looga qabto welwelka durugsan iyo raad raaca
Tijaabinta Iibka iyo otomaatigga waxay u baahan tahay firfircooni dheeraad ah sababtoo ah isku-xirnaanta isku-xirnaanta iyo wareegyada fulinta. Awoodaha AccelQ ayaa si khaas ah loogu sifeeyay hantida otomaatiga ah ee tijaabada u diyaarsan-ee aan lahayn cillad farsamo iyo madax sarre. AccelQ, shirkaduhu waxay awood u siin karaan adeegsadayaashooda ganacsi iyo daneeyayaasha kale waxayna kuheli karaan aragti dhameystiran tayada fulintooda Salesforce.
Tijaabada Bilaashka ah ee 'AccelQ' ee Iibinta
Tags: isweydaarsigaansaxinta nidaamka ganacsiga otomaatiga ahtijaabinta regression otomaatiga ahqalabaynta nidaamka ganacsigaiibiniibinta iibsigaxirmada iibkadanab iibiyatijaabinta iibkasayliniyamotomaatiga tijaabadamaaraynta imtixaankaqalabaynta tijaabintamuuqaal ahaan